THE CHAN EDUCATION – Page2– Welcome to The Chan Education Online
THE CHAN EDUCATION
Welcome to The Chan Education Online
တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ကို ပြောချင်တဲ့အခါမှာ သုံးရပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုက လိုရှင်း အဓိပယ်က တူပေမယ့် သုံးရတဲ့အပိုင်းကတော့မတူပါဘူး။ 고자က ပုံမှန်သုံးမဟုတ်ပေမယ့် အဆင့်ပိုမြင့်ပါတယ်။ တီဗီကြော်ဌာ၊ အခမ်းအနားတို့မှာ သုံးရတာများပါတယ်။ (으)려고 ကတော့ ပုံမှန်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျနော်က နိူင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ် (ပြင်ဆင်ပါတယ်) 저는 해외에서Read More
A/V-(으)며 နှင့် A/V-고
ဒီနှစ်ခုရဲ့ အဓိပယ်က “ပြီ” ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရတာ တူပေမယ့် (으)며 က 고 ထက် အဆင့်မြင့်ပါတယ်။ သိုသော်လည်း (으)며 ကတော့ စာရေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတာ များပါတယ်။ 고ကတော့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးများတယ်.. ဥပမာကို ကြည့်ရအောင်… 이 음식은 맛있으며 값도Read More
ကိုးရီးယားနိူင်ငံက နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေ တက်ရောက်ဖို့ဘာလိုအပ်သလဲ။
ကိုရီးယားနိူင်ငံဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ နိူင်ငံခြားကျောင်းသား/သူတွေ ၀င်ရောက်နှုန်းဟာတစ်ဖြည်းဖြည်း များလာတာတွေ့ ရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ကိုရီးယားစာ သင်လာတဲ့ နိူင်ငံခြားသားနှုန်းဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်များထက် အဆပေါင်းများစွာ တိုးလာတာကို တွေ့ နိူင်ပါတယ်။ ပြီခဲ့တဲ့ အပတ်မှာ ကိုးရီးယားကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် ပက်သက်ပြီ တင်ပြခဲ့ပါပြီ။ အခုတော့ နာမည်ကြီးကျောင်းမှာ ၀င်ရောက်ဖိုRead More
knowledge, Koea, Lifestyle
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာသူ ကိုရီးယားနိူင်ငံသား
၁၉၆၆ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက်မှာ လူလောကကို ရောက်လာတဲ့ ကိုရီးယားနိူင်ငံသား တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ နာမည်ကတော့ကင်(မ်)ပုန်းဆူး (Kim Boem-soo) ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သာမာန်လူတန်စား မိသားစုကနေ ဆင်းသက်တာဖြစ်ပေမယ့် လွန်ခဲ့သော၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ သူရဲ့တီထွင်မူကြောင့် ယခုဆိုရင် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ပါပြီ။ ဒီလို တစ်ခဏလေး အတွင်းမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီ အောင်မြင်မူရသလဲဆိုရင်….Read More
ဒီနေ့တော့ သဒ္ဒါနှစ်မျိုးတင်ပေးမယ်။ Level 2အဆင့်ရှိတဲ့ သဒ္ဒါတွေ ဆိုပေမယ့် အသုံးများတဲ့ သဒ္ဒါတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရအောင်ကျက်ပါဗျာ….. ၁။ N+때문에 (နာမ်+သောကြောင့်) နာမ် တစ်ခုခုကြောင့်လို့ ဆင်ခြင်ပေးတဲ့အခါမှာ သုံးရပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် နေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျောင်မလာတာပါ။ ဖြစ်ပျက်ကို ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ နာမ်နဲ့တွဲပြီ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာကိုRead More
V+ 게 되다
ဒီနေ့ တော့V+ 게 되다နှင့် ပက်သက်ပြီးတင်ပေးပါ့ မယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အတိတ်က မဖြစ်သေးတာ ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာစကားအရ ရလာပြီလေ၊ ဖြစ်လာပြီ၊ ဖြစ်လာလို့၊ တွေ့ဖြစ်လို့ ဆိုတာမျိုးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဥပမာကို အောက်က ဝါကျမှာ အတူတူ လေ့လာကြရအောင်….. 3개월 부터Read More
E9 ကနေ E7 ပြောင်းဖို့ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ။
E9 ဗီဇာဆိုတာ EPS (Employment Permit System)စနစ်နဲ့ ကိုရီယားမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ နိူင်ငံခြားသားတွေ ကိုင်ဆောင်တဲ့ ဗီဇာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဇာဟာ ၄နှစ် ၁၀လ သက်တမ်းရှိပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်တော်ပြန်ချင်ရင် အလုပ်ရှင်ဆီကနေ ခွင့်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြားမှာ အလုပ်စာချူပ်ရှိပါတယ်။ ဒီစာချူပ်ဟာRead More
Resume/CV နမူနာပုံစံ နှင့်ရေးနည်း
Resume/CV (သို့) ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဆိုတာ ဘာလဲ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် သည် အလုပ်ရရန်အတွက် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များသည် သင့်အား အင်တာဗျူးများ ရစေပြီး၊ ၄င်းတို့မှတဆင့် အလုပ်ခေါ်လွှာများ ရရှိစေပါသည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် သည် • အလုပ်လျှောက်မည့်သူ၏ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်များနှင့် အတွေ့အကြုံများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာ ဖြစ်ပါသည်။Read More
TOPIK (Test of Proficiency in Korean) အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Topik ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်လို Test of Proficiency in Korean ဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားလို한국어능력시험 ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပယ်မှာ ကိုးရီယားစာ စာမေးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ TOPIKဟာ ၁၉၉၇ကစပြီဖြေဆိုကာ အခုဆိုရင် နှစ်၂၀ နီးပါးသက်တမ်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး၂၂၇၄ယောက်နဲ့စဖြေပေမယ့် အခုဆိုရင် သိန်းနဲ့ချိပြီး ဖြေဆိုကြပါတယ်။ Wikipedia စာရင်းအရ ၂၀၁၂နှစ် နောက်ပိုင်းRead More
ကိုးရီးယားမှာ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲ?
ပထမဆုံးကျောင်းလျွာကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျောင်းလျှောက်လျွာအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲဆို၇ င် ၁။ ကျောင်းလျှောက်လျွာ ဖြည့်ရပါမည်။ ၂။ နိူင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ဓာတ်ပုံ ၃။ နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲံ့သော ကျောင်းဘွဲ့ လက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်း (နိုတြီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်) ၄။ အိမ်ထောင်စုစာရင်း (နိုတြီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်) ၅။ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သက်သေပြဖို့မိမိဘဏ်မှာ သိန်း ၂၀၀နှင့်အထက်… ၆။ကျောင်းလခသွင်းဖို့ ငွေ (ကျောင်းတိုင်းရဲ့ Read More
ကိုးရီးယားနိူင်ငံက န… on ကိုးရီးယားမှာ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ …
58 Gaebong-ro 1gil, Guro-gu, Seoul,
Working Time: 2:00pm - 6:00pm ( Mon- Fri), Sat ( 10:00am- 4:00pm)
© 2020 THE CHAN EDUCATION
Powered by WordPress.com. Miteri by ThemeEgg